महानायकको मन ढुङ्गाको हो र ? महानायकको मन ढुङ्गाको हो र ? Canada Nepal
महानायकको मन ढुङ्गाको हो र ?
मदन रिजाल कार्तिक १ २०७७
काठमाडौं । एकपटक सिनेमाका एक धुरन्धर एक्सन अभिनेता यात्राको क्रममा रहेछन् । सार्वजनिक यात्रा गरिरहेका उनीसँगै अन्य यात्रु पनि हुने नै भए । बाटोमा केही गुण्डाले अवरोध गर्दा सबै यात्रुको ध्यान तिनै एक्सन अभिनेतातर्फ गएछ, यो स्वभाविक पनि थियो, पर्दाको उनको एक्सन छविलाई दर्शकले वास्तविक नै ठानेका थिए। तर, अभिनेताले त्यहाँ आफ्नो एक्सन छवि देखाउनै सकेनन्, या चाहेनन् । ठ्याक्कै यस्तै अवस्था छ, जनताका महानायक राजेश हमालको । लामो समय पर्दामा अन्याय र अत्याचारविरुद्ध लडेका राजेशजति लोकप्रिय सायदै दर्शकमाझमा कोही अभिनेता होला । सिनेमा हेर्ने हरेकलाई राजेशको नाम कण्ठस्थ छ भने सिनेमा नहेर्ने दर्शकमाझ पनि उनको व्यक्तित्व परिचित छ । सिनेमामा कति जमिन्दारसँग उनी लडे, कति बलात्कारीलाई सजाय दिए, कति अन्यायमा परेकाको लागि आवाज उठाए ।
तर, चलचित्र र वास्तविक जीवनमा उनको भूमिका फरक छ । चलचित्रमा निर्वाह गरेजस्तै भूमिका वास्तविक जीवनमा खोज्नु मुर्खता पनि हो । तर, समाजको आदर्श र आशावादी एक अभिनेता वा राजनीतिज्ञबाट समाजले सकारात्मक भूमिकाको आशा गर्नु स्वभाविकै हो । समाज हुने अत्याचार, दूराचार र बेथितिबारे साधारण नागरिकले आवाज उठाउनु कर्तव्य हो भने यी आवाजहरुलाई समाजका आदर्श व्यक्तिले नेतृत्व लिएर परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढाउनु दायित्व हो । तर, उनै समाजका आदर्श र चलचित्र क्षेत्रका सफल व्यक्ति अभिनेता राजेश हमाल समसामयिक विषयमा बोल्दैनन्् । अझ भनौँ बरु ढुङ्गो बोल्ला तर राजेशको बोली फुट्दैन। उनको मौनता सदैव सबैका लागि प्रश्न भनेर बसिरहेको छ । कलाकारलाई कुनै पनि कुराले छिटो छुन्छ, खुसी र दुःखी चाँडै हुन्छन् । पीडा र खुसीको अनुभूति छिटो हुन्छ कलाकारमा, र त जीवन्त अभिनय गर्छन् ।
तर, समाजमा कयौँ विषयले बहसमात्रै सृजना गरेनन्, संगीन अपराधविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म संघर्ष चल्यो, र पनि यी विषयमा राजेश हमालले मौनता साँधे । कुनै पनि विषयमा बोल्ने नबोल्न व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो । तर, एक सेलिब्रेटी वा जनताको आदर्श व्यक्ति समाजको विकृति र बेथितिविरुद्ध मौनता साँध्नु पक्कै पनि दुःख लाग्दो कुरा हो । राजेश हमालको एक बोली समाजको रुपान्तरण र बेथेति अन्त्यका लागि हजारौँ भूइँ मान्छेको आवाजभन्दा ठूलो हुन सक्छ । उनको अभिव्यक्तिले उनका दर्शकदेखि कानुन निर्माता र कार्यान्वयन तहमा रहेकाहरुको कानसम्म पुग्न सक्छ । तर, निर्मला पन्तदेखि सम्झना विकसम्मका बलात्कारी र हत्यारालाई सजाय दिन चर्को आवाज उठे, जनताको चासोमा रहेका कुलमान घिसिङको विषय निकै चर्कियो, गोविन्द केसीको अनसन होस् वा अन्य कुनै विषय ।
जनतामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता विषयमा धेरैले आवाज उठाए । तर, जनताका प्रिय र हरेक क्षेत्रमा आफ्नो परिचय र पहिचान बनाएका जनताका महानायक राजेश यस्ता विषयमा न बोल्छन्, न केही लेख्छन्। बरु कसैले आफ्नो महानायकको पगरीमा टिप्पणी गरे घुमाउरोपारामा प्रष्टीकरण दिन पछिपर्दैनन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्र उठ्न र यहाँसम्म आइपुग्न राजेशको अतुलनीय योगदानले सबैको शीर झुक्छ, उनीप्रति नतमस्तक हुन्छन् । यसप्रति हरेकको मनमा उनीप्रतिको आभार र सम्मान सधँै छ । तर, जनताका महानायकले जनचासोका विषयमा थोरै बोल्दिए पनि ठुलो राहत मिल्ने थियो कि भन्ने अपेक्षा समाजले गर्न थालेको छ ।
कार्तिक १, २०७७ शनिवार १२:२३:५६ बजे : प्रकाशित
फेरि विवादमा तानिए र्‍यापर भिटेन, कारवाही गर्न साइबर ब्युरोलाई चिठी
काठमाडौ । 'हामी यस्तै त हो नि ब्रो गीत' का गायक समीर घिसिङ (भिटेन) फेरि विवादमा तानिएका छन् । दसैंको बेला सार्वजनिक गरिएको नयाँ गीत 'पारा' लाई लिएर उनी विवादमा तानिएका हुन् ।
भिडियोमा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेको भन्दै भिटेनलाई कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यलयले बिहीबार साइबर ब्युरो भोटाहिटीलाई पत्र पठाएको छ ।
उनले गीतमा बोलेको शब्दका कारण गीतमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यलयले साइबर ब्युरोलाई पत्र पठाएको हो । यस अघि पनि भिटेन गीतकै कारण विवादमा तानिएका थिए ।
प्रहरीलाई आपत्तिजन शब्दहरु तथा दृश्य प्रयोग गरी भिडियो गीत बनाएपछि गित नै डिलिट गर्नु परेको थियो भने आइन्दा यस्तो कार्य नगर्ने कागज गराई छाडिएको थियो ।
कार्तिक १३, २०७७ बिहिवार १८:२६:१६ बजे : प्रकाशित
# र्‍यापर भिटेन
काठमाडौं - हास्यकलाकार मनोज गजुरेललाई कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ । उनलाई आइतबार गरिएको कोरोना परिक्षणमा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो । उनले आफुलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको बार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
उनले फेसबुकमार्फत टाउको दुख्ने, ज्वरो आउँने र ढाड दुख्ने समस्या देखिएपछि कोरोना परिक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको बताएका छन् । उनले कोरोना जुनसुकै बेला लाग्ने बताउदै आफू सचेत रहन, अरुलाई सुरक्षित रहन तथा 'पोजिटिभ' देखिई हालेमा पनि नआत्तिन र बिश्वासिलो चिकित्सकको सम्पर्कमा रहन अनुरोध गरेका छन् ।
उनले अन्तिममा लेखेका छन् - /मलाई बिश्वास छ, मेरो शरीरमा प्रबेश गरेको यो भाईरस मेरो शारिरिक, मानसिक र आध्यात्मिक शक्तिभन्दा बलियो पक्कै छैन । त्यसैले मैले यो भाईरसलाई आफ्नो शक्तिशाली ईम्युन सिस्टममा स्वागत गरिसकेको छु । तपाईंहरुको शुभकामनाले त मेरो शरीरको जीत र भाईरसको हार झन् चाँडो हुनेछ ।'
कार्तिक ११, २०७७ मंगलवार ०७:४१:५३ बजे : प्रकाशित
कार्टुन क्रूको 'रातो रिबन कालो कपालमा' सुधीर र गरिमाको धमाकेधार अभिनय
काठमाडौँ। नेपाली सङ्गीत क्षेत्रकी एक बहुप्रतिभाशाली तथा लोकप्रिय गायिका अन्जु पन्तको नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गायिका अन्जु पन्त र सञ्जीव लामिछानेको सुमधुर स्वरमा रहेको रातो रिबन कालो कपाल बोलको आधुनिक गीत सार्वजनिक गरिएको हो ।
'रातो रिबन कालो कपालमा’ बोलको सो गीतमा शब्द यादव लम्सालले दिएका हुन् भने सङ्गीत अर्जुन पोखरेलले भरेका छन्। निर्देशक रामजी लामिछानेको सो गीतको भिडिओमा कार्टुन क्रूका सरोज अधिकारी, आष्मा विश्वकर्मा, मोडेल सुधीर श्रेष्ठ, गरिमा शर्माको मुख्य अभिनय देख्न सकिन्छ । साथै वसन्त अधिकारी र सञ्जीव लामिछानेको सहायक भूमिका रहेको छ।
म्युजिक भिडियोलाई छायाङ्कन सौरभ लामाले गरेका छन् भने यस भिडिओको सम्पादन अर्जुन जी सीले गरेका हुन्। गीतलाई पूर्सोत्तम सुबेदीले एरेन्ज गरेका छन्। भिडिओमा कलाकारहरूलाई नचाउने निर्देशक रामजी लामिछाने स्वयम् हुन्।
कार्तिक ९, २०७७ आइतवार १९:४१:२४ बजे : प्रकाशित
# कार्टुन क्रू
# सुधीर र गरिमा
लोकगायक श्रेष्ठको हृदयाघात कारण निधन
काठमाडौं - लोकगायक मधुराप्रसाद श्रेष्ठको निधन भएको छ । उनको घोराही उपमहानगरपालिका –१४ मिलनचोकस्थित निवासमा ७५ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो।
श्रेष्ठको हृदयाघात कारण निधन भएको जनाइएको छ । उनले २०३० सालमा पहिलो पटक रेडियो नेपालमा लोकगीत रेकर्ड गरेका थिए ।
उनी एक कुशल गायक, सर्जक एव सङ्गीतकार हुन् । २००२ सालमा प्युठान जिल्लामा जन्मिएका थिए । उनका श्रीमती, दुई छोरा र दुई छोरी छन् ।
कार्तिक ६, २०७७ बिहिवार २१:०३:०७ बजे : प्रकाशित
# मधुराप्रसाद श्रेष्ठको निधन
गायक सुनिल गिरीको दशैँ कोशेली 'मसला'
काठमाडौँ । गायक सुनिल गिरीको नयाँ गीत 'मसला' को भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सुनिल र गायिका एलिना चौहानको स्वर रहेको मसलामा टिकटक स्टार सुधिर श्रेष्ठ, लोकप्रिय हाँस्य कलाकार बुद्धि तामागं, सुन्दरी नायिका जेबिका कार्की र विशाल रेग्मीको अभिनय रहेको छ ।
गायक गिरीकै कन्सेप्ट, निर्देशन, शब्द, संगीत र एरेन्जमा तयार भएको भिडियोको कोरियोग्राफी सुरेन्द्र बसेलले गरेका हुन् ।
विकाश दाहालको कलर र सम्पादन रहेको भिडियोको छायांकन छायांकार हरि हुमागाईले गरेका हुन् । गायक गिरीका को होला त्यो मसँग आँखा जुधाउने, रोगै पिरती, सोल्टिनी भनी बोलाको, मुग्लान लगायतका गीतहरु चर्चित छन् ।
कार्तिक ६, २०७७ बिहिवार २०:३२:५८ बजे : प्रकाशित
कलाकार हरिवंश आचार्य दम्पती कोरोनामुक्त
काठमाडौं । लोकप्रिय कलाकार हरिवंश आचार्य दम्पती कोरोनामुक्त भएका छन् । कलाकार आचार्यले बिहीबार बिहान आफू र पत्नी रमिला आचार्यको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिएका छन् ।
‘हाम्रो कोरोनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । हामीलाई धेरै धेरै माया दिनुहुने सबैमा धन्यवाद,’ हरिवंशले फेसबुकमा लेखेका छन् । नयाँ सिनेमा, टेलिफिल्म र विज्ञापन सुटिङ गर्ने क्रममा आफूमा कोरोना संक्रमण फैलिएको आचार्यले बताएका थिए ।
कोरोना संक्रमणपछि होम आइसोलेसनमा बसेका बेला हरिवंशले कोरोनालाई सामान्य नठान्न आग्रह गर्दै यसपटकको दशैंमा आफ्नो घरमा टीका लगाउन नआउन उनले सबैलाई भनेका थिए ।
कार्तिक ६, २०७७ बिहिवार ०९:४७:३० बजे : प्रकाशित